Wednesday September 09, 2020 - 17:01:52 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Saraakiil ka socda taliska ciidanka Mareykanka ee qaaradda Afrika ayaa socdaal ku jooga magaalada Muqdisho waxayna kulamo laqaateen mas'uuliyiinta ugu sarraysa dowladda Federaalka.
Wafdigan oo ay horkacayaan Jeneraallo American ah ayaa kulan gaar ah laqaatay Max'med Cabdulaahi Farmaajo oo ay siiyeen awaamir ku aaddan habacsanaanta dhan walba ah ee soo wajahday dowladda Federaalka.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in saraakiisha American-ka ah ay Farmaajo ku amreen in uu shaqadiisa dib ugu celiyo taliyaha Maleeshiyaadka Bangaraafta loo yaqaan oo maalmo ka hor uu Eryay Fahad Yaasiin oo lagu sheego milkiilaha xukuumadda Villa Somalia.
Wararka ayaa intaas ku daraya in dowladda Mareykanka ay hoggaanka dowladda Federaalka kala hadashay taakdarrida maleeshiyaadkeeda oo aan kasoo bixin wixii reergalbeedku ay utababareen oo ahaa ka adkaashiyaha Shabaabul Mujaahidiin.
Farmaajo ayaa wajahaya cadaadisyo siyaasadeed tan iyo markii uu shaqada ka eryay R/wasaarihiisi hore Xasan Cali Kheyre kaasi oo hadda xabsi guri ku ah dhisme kuyaal hareeraha garoonka diyaaradaha Muqdisho, illaa iyo hadda Farmaajo sooma magacaabin Raysalwasaare cusub walina heshiis loo dhanyahay lama gelin madaxda maamul goboleedyada.
Socdaalka saraakiisha Americanka ah ayaa imaanaya laba maalin kadib markii uu dhacay weerarkii Janaay Cabdalle oo lagu dilay 4 askari American ah iyo tobanaan katirsan maleeshiyaadka Bangaraafta ee Mareykanku ku adeegto.